अपरिहार्य को लागी एक ग्यारेन्टी आय
José Quiñonez मा सेप्टेम्बर 2, 2021 द्वारा लिखित।
मँ महामारी को समयमा धेरै संगीत सुन्ने गरेको छु, हाम्रो संसार को अर्थ बनाउन को लागी। एक विश्वव्यापी महामारी, आगलागी, आगो, मतदाता दमन, एक सम्झना चुनाव, र शरणार्थी संकटहरु मात्र मन को शीर्ष मा के केहि छन्।
त्यहाँ एउटा गीत भनिन्छ "Sueño con Serpientes" - क्युबाली संगीतकार र कवि सिल्भियो रोड्रिगेज द्वारा — जसले शक्तिशाली रूपकहरुको प्रयोग गर्दछ जुन मलाई लाग्छ कि हामी आज के बाट जाँदैछौं।
सिल्भियोले यो गीत १5in५ मा एउटा दुःस्वप्न बाट लेखेका थिए जहाँ उनी हाइड्रा जस्तै प्रवृत्ति संग पारदर्शी सर्पहरु संग लड्छन्। हरेक पटक उसले एउटा सर्प मार्छ, अर्को ठूलो सांप देखा पर्दछ।
परिचित आवाज? म अझै अर्को कोभिड १ sur को उथलपुथल को बीचमा गीत दोहोर्याउँछु। महिना पहिले, हामी भाइरस पिटिरहेका थियौं जब सम्म डेल्टा संस्करण देखा पर्दैन। सुरंग को अन्त्य मा प्रकाश दृष्टि भित्र थियो! अब, हामी फेरी महामारी को मोटामा छौं। तर सबै आशा को लागी हराएको छैन, गीत जान्छ, सिल्भियोले ठूलो सर्पलाई पराजित गर्दछ जब उनी घोषणा गर्दछन् अन भर्सो, एक सत्य.
मलाई थाहा छ। यो सोच्न को लागी सुखदायक छ कि एक मात्र सत्य को घोषणा गर्नाले सर्पहरु को शक्तिशाली पराजित गर्न सक्छ, वा जुनसुकै राक्षस वा महामारी हामी विरुद्ध लडिरहेका छौं। सत्य, यो बाहिर जान्छ, हाम्रो विश्वास लाई बलियो बनाउन को लागी आवश्यक छ तर यो एक नायक हुन को लागी धेरै धेरै लाग्छ। सिल्भियो संकेत छ कि गीत को शुरुवात मा यो Bertolt Brecht कविता सुनाएर के हो:
"त्यहाँ एक दिन को लागी लड्ने मानिसहरु छन्, र उनीहरु राम्रो छन्।
त्यहाँ अरु जो एक बर्ष को लागी लड्छन्, र उनीहरु राम्रो छन्।
त्यहाँ ती जो धेरै बर्षहरु को लागी लड्छन्, र उनीहरु अझै राम्रो छन्।
तर त्यहाँ ती सबै छन् जो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लड्छन्: यी अपरिहार्य हुन्। "
एक मात्र युद्ध जितेर विजय सुनिश्चित छैन। यो समय को साथ एक वास्तविक नायक हुन को लागी वास्तविक काम लिन्छ - ती जो दिन र दिन बाहिर लडिरहेका छन्, बर्षहरु मा, र आफ्नो जीवनकाल भर, कविता राज्यहरु को रूप मा, अपरिहार्य छ।
आज हाम्रो संसार मा, मँ अपरिहार्य को रूप मा आवश्यक कामदारहरु को बारे मा सोच्दछु, वास्तविक नायकहरु।
यसकाे बारेमा साेच। कोभिड 19१ vacc को खोप व्यापक रूपमा उपलब्ध हुनुभन्दा पहिले नै, आवश्यक कामदारहरु कृषि क्षेत्रहरुमा, खाना प्रशोधन संयंत्रहरुमा, र रेस्टुरेन्टहरुमा काम गर्न को लागी देखाईयो जब हामीलाई उनीहरुको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता थियो। उनीहरु काम गर्न को लागी देखाए, हाम्रो समाज लाई जारी राख्न को लागी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर। आप्रवासी श्रम बिना, हाम्रो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला भble्ग हुने थियो, समाज मा अतुलनीय आतंक र हानि को कारण।
सबैलाई एउटै भन्न मिल्दैन। हाम्रो संघीय सरकारले आप्रवासी परिवारहरु को लागी देखाएन, बरु उनीहरुको संघर्ष लाई बेवास्ता गरी परिवारहरु को आय गुमायो, बचत कम भयो, र maण जम्मा भयो। उनीहरुले आप्रवासी परिवारहरुलाई राहत प्राप्त गर्न बाट वञ्चित गरे जसले उनीहरुलाई बिल संगै रहन र घर बस्न भाडा तिर्न मद्दत गर्न सक्थ्यो।
आप्रवासी परिवारहरुलाई राहत बाट वञ्चित गरीएको अन्याय देखेर हाम्रा छिमेकीहरु एक हात उधारो मा उभिए।
MAF ले $55M उठाउनुभयो ,000३,०००+ अनुदान प्रदान गर्न को लागी कागजातविहीन परिवारहरु, कामदारहरु, र बिद्यार्थीहरुलाई आधारभूत र तत्काल आवश्यकताहरु लाई कभर गर्न को लागी। तर जब हामी हाम्रो छिटो प्रतिक्रिया अनुदान कार्यक्रम बन्द, हामी जान्दछौं कि यो स्पष्ट रूप बाट पर्याप्त थिएन। आवश्यकता अपार र गहन थियो। COVID-19 परिवारहरुको आर्थिक जीवन ध्वस्त भयो, र यो उनीहरु लाई निको हुन बर्षौं लाग्नेछ।
हामी धेरै गर्न को लागी तयार छौं। MAF मा हामी छिटो प्रतिक्रिया अनुदान बाट बच्चाहरु संग परिवारहरु लाई जो अब विस्तारित बाल कर receivingण प्राप्त गर्न बाट बहिष्कृत गरीरहेका छौं लाई दीर्घकालीन सहयोग प्रदान गर्न को लागी सार्दै छौं। सामाजिक सुरक्षा नम्बर बिना एक लाख भन्दा बढी आप्रवासी बच्चाहरु लाई समर्थन प्राप्त छैन। हामी MAF को सुरुवात गर्दैछौं आप्रवासी परिवार रिकभरी कोष १TP2T25M बीउ कोष को साथ आप्रवासी परिवारहरु लाई दुई बर्ष सम्म ग्यारेन्टी आय प्रदान गर्न को लागी। सहभागीहरु प्रत्यक्ष नगद, गहन वित्तीय कोचिंग, आत्म-वकालत प्रशिक्षण, र क्रेडिट को निर्माण को MAF को सूट र शून्य ब्याज loansण प्राप्त गर्न को लागी छिटो आफ्नो वित्तीय जीवन पुनर्निर्माण मा मद्दत प्राप्त गर्नेछन्।
MAF मा, हामी गरिबी बिरूद्धको लडाईमा हामीले सहन सक्ने सबै ल्याइरहेका छौं, जसरी वैश्विक महामारीको बिचमा आवश्यक कामदारहरुले गरे।
र हामी अझ राम्रो गर्न चाहन्छौं। हामी योजना बनाउँछौं मूल्यांकन, अध्ययन, र साझा सार्थक प्रणाली परिवर्तन को लागी नीति समाधान को लागी सूचित र प्रेरित गर्न को लागी हामी उनीहरुको रिकभरी यात्रा बाट जान्दछौं।
सिल्भियोको संगीत सुन्नु मलाई यो तथ्य को कदर गर्दछ कि, चाहे हामी पारदर्शी सर्पहरु लाई मार्दैछौं वा आगो संग लडिरहेका छौं या गरीबी संग लडिरहेका छौं, यो कुनै पनी विजय सुनिश्चित गर्न को लागी जीवन भर मा वास्तविक विश्वास र कडा मेहनत लिन्छ।
यो कहिल्यै हाम्रो लागि एक पटक लडाई भएको छैन, तर हाम्रो जीवन को लागी लडाई हो। त्यो हाम्रो सत्य हो।